"भिक्षुसँगको प्रेम" भित्रको प्रेम
एउटा पाठकका रूपमा नियात्रालाई म यात्राको निजानुभूतिका रूपमा लिन्छु। भूगोल र भौतिक विकास आदिको लम्बेतान रूखो वर्णन भएका र कर्कश विद्वत्ता मात्र छाँट्ने यात्रा वर्णनहरूले वाक्क लगाएका बेलामा एउटा उम्दा नियात्रा बजारमा आएको छ, उषा हमालको “भिक्षुसँग प्रेम”।
हेर्दै आकर्षक लाग्ने कभर र शीर्षक भएको नियात्रा कम्तीमा मेरा लागि भने पेज टर्नर रह्यो। बडो आनन्दका साथ फारू गर्दै पढिसिध्याएँ। कुनै पनि पुस्तकको गुणवत्ताको छनक सबैभन्दा पहिले त्यसको शीर्षकले दिन्छ, र त्यसपछि कभर डिजाइनले। मलाई पुस्तकका शीर्षकहरूमा कर्कश शब्दहरूको हल्ला मन पर्दैन। त्यसैले पुस्तक किन्दा यदि शीर्षकले तानेन भने म किन्दै किन्दिनँ। उषा हमालकै यसभन्दा पहिलेको नियात्रा “सागओल अजरबैजान” बडो प्रेमका साथ पढेको छु र त्यो पनि मेरा प्रिय पुस्तकहरू मध्येको एक पर्छ।
भिक्षुसँग प्रेम, खासमा विभिन्न समयमा गरिएका देशभित्र र बाहिर विभिन्न थरीका यात्राहरूबारे उषा हमालको निजात्मक अनुभूतिको सङ्गालो हो। मान्छेको पीडा देखेपछि मन आँसुले लफ्रक्कै भिज्ने, राम्रा कुराहरूले मन उत्साहित हुने, मानवमूल्यप्रति सधैँ आस्था हुने, अव्यवस्था र दुर्गन्धबाट पीडा बोध हुने, आदिजस्ता अनुभूति उषा हमालका मात्र नभएर यो पुस्तक पढ्ने हरेक पाठकका हुन पुग्छन्।
अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। साइनो वा सम्बन्धका बारेमा आम मानिसहरू खुल्न चाँहदैनन्। मैले कतिपय यस्ता मानिसहरू भेटेको छु वा देखेको छु जसका मुस्कानहरू जहिल्यै छद्म हुन्छन्। मनले एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ भने अनुहारले अर्कै। भित्रभित्रै एउटा सम्बन्ध हुन्छ बाहिर अर्कै। त्यस्तो छद्म व्यक्तित्व न उषाको पुस्तकमा भेटिन्छ न अनुहारमा। जे सत्य छ, त्यही छ भित्र पनि बाहिर पनि। नपत्याए अन्तिम पाताको भित्रपट्टि रहेको उनको फोटो हेर्नुहोस्। आफैँ बुझ्नुहुनेछ।
अहम् भन्ने कुरा “भिक्षुसँग प्रेम”मा कहीँ पनि कतै पनि भेटिँदैन। “ऊभन्दा म महत्त्वपूर्ण हुँ, किनकि म वर्तमान हुँ र ऊ विगत हो” भन्ने किसिमको भाव उनका कुनै पनि अनुभूतिमा देखिँदैन। उषाको मनको इमानदारिता र निश्चलताले हामीलाई उनीप्रति नतमस्तक बनाउँछ। प्रेम तथा पारिवारिक जीवनको अतीत तथा वर्तमानका विषयमा उषाले कोमल शब्दहरू पोखेकी छिन् यस पुस्तकमा।
धेरै लेखेर पाठकको आनन्दमाथि प्रहार गर्न मन लागेन। इति।
Posted by Kumud Adhikari at 7:19 AM No comments:
"हनुमान" उपाधी दिइएका केही ट्वीटका नमुना हेरौँ....
यसरी 'हनुमान'को हुर्मत लिएको देखेपछि मलाई चाहिँ
बस् फेरि झोँक चल्छ ! (वैरागी काइँला)
हनुमान को हुन् र किन पूजिन्छन् ?
हनुमान सनातनीहरूका आराध्य हुन्। हनुमानका नाममा व्रत बसिन्छन्, पूजाआजा गरिन्छन्। मानिसहरूले प्रातः हनुमान चालीसा पाठ गर्छन्। म पनि गर्छु। हनुमान चालीसामा हनुमानले सूर्यलाई मीठो फल मानेर खाएको प्रसङ्ग छ। तर मलाई यो हनुमानको अनन्त शक्ति बयान गर्नका लागि कविले लिएको प्रतीक झैँ लाग्छ। हनुमान चालीसा एउटा काव्य हो र काव्यमा कुनै कुरो भन्दा प्रतीक र बिम्बमा भनिन्छ, सोझै भनिँदैन। त्यसदेखि बाहेक भक्ति काव्यको शब्दार्थ भन्दा पनि त्यो पाठ गर्दाको लय र ध्वनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको सबैभन्दा राम्रो र बुझिने उदाहरण, कविवर माधवप्रसाद घिमिरेको "गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली" सुन्दा/पढ्दा हुन्छ।
हनुमान चालीसा हनुमानका कीर्तिहरूको गान हो। म विज्ञानको विद्यार्थी भै टोपलेकाले, पृथिवीको एउटा बानरले कसरी पृथिवीभन्दा करोडौँ गुना ठूलो सूर्यलाई मीठो फल सम्झेर खान खोजे वा कसरी उफ्रिएर सूर्यनजिक पुगे भन्ने कुरा बेतुकको लाग्न सक्छ। यो कुरा असम्भव हो भन्ने बोध मेरो ज्ञानले दिन्छ, तर पनि मलाई हनुमान चालीसा मन पर्छ। मन परेपछि मन पऱ्यो, मलाई आस्थाको ठाउँमा तर्क मिसाउन मन लाग्दैन।
पाश्चात्य दर्शनको पर्याप्त ज्ञान भएका मेरा पिताजी बिहान सन्ध्या गरेपछि सधैँ केही स्तोत्रहरू पाठ गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले पाठ गरेको सुनेर नै मलाई कतिपय स्तोत्र कण्ठ छन्। हनुमान चालीसा पनि त्यसरी नै आउँदो भएको हो। हनुमान चालीसामा वर्णित हनुमानका कीर्तिहरू जतिनै बेतुक लागे पनि हनुमान चालीसा हाम्रो हो, हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो परम्परा हो, हाम्रो आस्था हो, हाम्रो परिचय हो। मलाई अरूले भिराइदिएको पूर्णता भन्दा आफ्नै अपूर्णता मन पर्छ। अरूले थोपरेको सभ्यताभन्दा आफ्नै असभ्यता मन पर्छ। प्रकृति पूजक हाम्रो सनातनी सभ्यता मन पर्छ। मलाई मेरै देवीदेवता मन पर्छन्।
हनुमानलाई कपि, महावीर, पवनपुत्र, बजरङ्गबली, आदि नामले पनि जानिन्छ। सनातन संस्कृतिमा हनुमान बल, पराक्रम, शक्ति, तथा भक्तिका द्योतक हुन्। हनुमानका महिमा वर्णन गर्ने बाह्र नामहरू पनि छन्, ती हुन्: हनुमान, अन्जनी सुत, वायु पुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुण सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उधतिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता र दशग्रीव दर्पहा।
पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदा म सधैँ हनुमानको प्रतिमासामु शिर झुकाउँछु। पिण्डेश्वर महादेव मन्दिरमा विराजेका हनुमानलाई पूजा गर्छु। उनका चरण छुन्छु। अन्यत्र पनि हनुमान मन्दिर देखेँ भने श्रद्धाले मेरो शिर झुक्छ।
हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम रामका अनन्य भक्त थिए। रामायणको सुन्दरकाण्डमा हनुमानको महिमा वर्णन गरिएको छ। हनुमान सधैँ विनम्रता र भक्तिका प्रतीकका रूपमा चिनिन्छन्।
यन्त्र साधनामा हनुमान यन्त्रको उपासना गरिन्छ। जसरी श्रीयन्त्र साधना धनधान्य तथा भौतिक समृद्धिका लागि गरिन्छ, त्यसै गरी हनुमान यन्त्र साधना बल, पराक्रम, शौर्य, शक्ति आदिका लागि गरिन्छ। मेरो अध्ययन अत्यन्त अल्प भएकाले यन्त्र साधनका वा तन्त्र साधनाका विषयमा धेरै कुरा गर्न सक्तिनँ। तर पनि मेरो शिर मेरा बाआमाले गरेका काम, उहाँहरूले मानिल्याएको परम्परा, संस्कृतिप्रति जहिले पनि निहुरिन्छ। हाम्रा तिनै परम्पराले हामीलाई सहिष्णु, स्वतन्त्र, र उदार बन्न सिकाएका छन्। अरूको आस्थाको आदर गर्न सिकाएका छन्। अनावश्यक रुढी र अन्धविश्वासबाट बच्न सिकाएका छन्। अरूको आस्थाको निन्दा गर्दा, धर्मको आलोचना गर्दा आफ्नो बोली अपवित्र हुन्छ भन्ने सिकाएका छन्।
नेपालमा अहिले विचित्रको चलन भित्रिएको छ। मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा। ओलीका, बाबुरामका, देउवाका, फलानाका, ढिस्काका हनुमानहरूले यसो गरे उसो गरे....। यदि आफ्ना नेतालाई त्यत्तिको अन्ध समर्थन गर्नेहरू यदि हनुमान हुन् भने ओली, देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम वा अन्य कुनै नेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुन् त ? ओलीका हनुमानले यसो गरे उसो गरे भन्नु भन्दा पहिला तपाईँहरूले कृपया ओली कसरी राम भए बताइदिनु हुन्छ कि? देउवा वा राजेन्द्र महतो वा बाबुराम कसरी राम भए? प्रचण्ड कसरी राम भए? अन्य कुनै नेता कसरी राम भए ? तिनमा राममा हुनु पर्ने कुन कुन गुणहरू छन्? कैकेयीको एक वचनमा सत्ता त्यागेर वनवास जाने रामले जस्तो काम गर्ने कुन नेता छन्? अनि रामको एउटै पनि विशेषता नभएका कथित नेताहरूका पिछलग्गूहरू चाहिँ कसरी हनुमान भए ?
पिछलग्गूहरूलाई हनुमान भन्नुभन्दा पहिले कृपया एक पटक मात्र भए पनि रामायण पढ्नुहोस्। हनुमान को थिए चिन्नुहोस्। हामी सनातनीहरूले पूजा गर्दै आएका हनुमानको नाम कुनै निःकृष्ट कार्यकर्तालाई नदिनुहोस्, कुनै पिछलग्गूलाई नदिनुहोस्, कुनै कठपुतलीलाई नदिनुहोस्, कुनै दासलाई नदिनुहोस्, कुनै चम्चालाई नदिनुहोस्।
यति नै हो मेरो आग्रह ! आगे यहाँको मर्जी !!
जय हनुमान ! जय बजरङ्गबली !
Posted by Kumud Adhikari at 10:59 PM 1 comment:
त्रासद समयको आलाप
अहिलेको जस्तो विषाक्त समयमा केही लेख्नुले पनि सायदै केही अर्थ राख्ला। प्रकृतिसँग धेरै चुरीफुरी देखाउने मानव अहिले चार भित्ताभित्र कैद छ। लाग्छ बाहिर निस्कनेबित्तिकै एक मुठी सास शरीरबाट फुत्त फुस्किन्छ। घरमा बस्नको बाध्यताले कति पार्श्व प्रभावहरू पार्ने हुन् त्यो भविष्यले बताउला। तर घर बस्न बाध्य भएका मेरा आफन्त, बन्दुबान्धव, छरछिमेकी, साथीभाइहरू, कनिष्टहरू, वरिष्टहरूले एक मुठी सास त्यागेको समाचारले हृदय नै छियाछिया हुन्छ। शुभ जन्मोत्सव लेख्नु पर्ने समयमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्दा हात काँप्छन्। भान हुन्छ मानव जीवन कति क्षणभङ्गुर छ! कति निरीह छ! दुई दिन अघि अस्पतालबाट सञ्चै छ भन्ने मानिसको मृत्युको खबर दैलो ढकढक्याउँदै आइपुग्छ।
हामीमध्ये केहीलाई अधिकतम स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि कोभिडले समात्यो। कोभिडको पहिलो लहरमा हामी धेरै जसो निकै बिरामी भयौँ। डाक्टरहरूको समयोचित सल्लाह र परामर्श अपनाएर दोस्रो जीवन पाएका भाग्यमानी मध्ये म पनि हुँ। डाक्टरको सल्लाह नमान्दा, अजासु(अति जान्ने सुन्ने) हुँदा, सामाजिक सञ्जालका अप्रामाणीक स्रोतहरूलाई पत्याउँदा धेरै जनाले असमय ज्यान गुमाउनुभएको छ। खोप उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि मलाई केही हुन्न भन्ने अहम् पालेर बसी, शरीरमा अक्सिजनको कमी हुनासाथ अस्पताल दौडाउँदा पुऱ्याउन नभ्याएर बाटैमा एक मुठी सास खुस्किएको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेका कति उदाहरण भैसके, हिसाब राख्न यो हातले मानेको छैन।
शर्पदंशबाट मृत्यु हुनेहरूमध्ये नब्बे प्रतिशत मृत्यु विषले नभएर डरले भएको भन्ने भनाइ मैले कैयन् पटक सुनेको छु। अहिले कोरोनाको कालमा पनि अक्सिजन कमी हुनासाथ मरि पो हाल्छु कि भन्ने डरले, कोरोनाले भन्दा पहिले मानिसहरू मारिरहेको छ। डर वा भय सद्दे मान्छेका लागि पनि अत्यन्त घातक हुन्छ। अझ मृत्युको भयले अहिलेको कलियुगी मानव अत्यधिक डराउँछ। तर जति डराए पनि मृत्यु शास्वत सत्य हो। कसैको चाँडो, कसैको ढिलो मात्र हो। तर यो मनले यही कुरा स्वीकार गर्न मान्दैन।
सामान्य अवस्थामा आफूअगाडि एउटा सिङ्गै जिन्दगी हुने मानिसले फुस्स सास छोड्दा चाहिँ असाध्यै पीडा हुन्छ। तपाईँ हामीले प्रेम गर्ने, आदर गर्ने, सम्मान गर्ने कतिपय व्यक्तित्वहरूलाई लाखौँ प्रयत्न गर्दा पनि बचाउन सकिएको छैन। स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन जटिलता भएकाहरूलाई कोरोनाले उठ्न दिएको छैन। हामीमध्ये धेरैले अटेरी गरेर बिहे आयोजना गर्दा बिहेकै भोलिपल्ट बेहुली परलोक गइन्। जग्गेबाटै अस्पताल लगिएकी बेहुलीलाई घरमा भित्र्याउन पाइएन। बिहेको पर्सीपल्ट बेलुला परलोक गए। बिहेमा सामेल भएका अधिकांश अस्पताल भर्ना छन्। यस्ता समाचार सुन्दा कहाली लागेर आउँछ। अझ गाउँको मुरी मुरी धान फल्ने गैह्री खेत बन्धकी राखेर हेलिकप्टरबाट अस्पताल पुग्दा पनि एक मुठी सास फर्काउन नसक्दा कस्तो लाग्दो हो, सोच्न पनि सकिन्नँ। पहिलो पटक सहरमा धावा बोलेको कोरोनाको सन्तानले अब गाउँघर ताकेको छ। भयावह स्थितिको कल्पनाले आङ सिरिङ्ग हुन्छ।
अहिलेको समय द्रव्यपिसाचहरू अतिसक्रिय भएको समय हो। नियमसङ्गत मोल वृद्धिभन्दा पनि मौकामा चौका हान्ने द्रव्यपिसाचहरूले तपाईँहामीलाई बाँच्न दिँदैनन्। ती विगतमा पनि त्यसै गर्थे, आगतमा पनि त्यसै गर्छन्। पिसाचहरूले कुनै नियम पालना गर्दैनन्, साइत हेर्दैनन्, तपाईँ हाम्रो आर्थिक स्थिति हेर्दैनन्। ती द्रव्यपिसाचहरूले तपाईँ हाम्रो खाना निल्छन्, औषधि खान्छन्, खोप खान्छन् र अब त प्राणवायु नै खान थालीसके। हामी निरीह छौँ, विवश छौँ।
मलाई चिन्नु हुने वा मेरा आफन्त, मेरा कनिष्ठ पनि र वरिष्ठ पनि कोभिडको नयाँ भेरियन्टले युवाहरूलाई टपक्क टिपेको देख्दासमेत खोप लगाउँदिन भनेर अझै अड्डी कसेर बसिरहनुभएको छ। उहाँहरूले पढेर थुप्रै डिग्रीहरू पनि कमाउनु भएको होला। तर यसरी बस्दा आफू कति असुरक्षित छु भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएको छैन। अहङ्कार कति घातक हुन्छ त्यो थाहा हुँदा, सायद धेरै ढिलो भैसकेको हुन्छ। कम्तीमा पछुताउन त पाइयोस्।
हामी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा परपीडकहरूले फैलाएका भ्रामक हल्लाहरू पत्याउँदै, आफू सूरवीर भएको प्रमाणीत गर्न लागीपरेका छौँ। तर त्यस्ता सूरवीरता देखाएका धेरैलाई कोरोनाको दोस्रो वा तेस्रो भेरिएन्टले पाताल पुऱ्याएको देखेर पनि हामी नदेखेझैँ गर्छौँ। कोरोना जति म्यूटेन्ट बन्दै जान्छ, त्यति नै सङ्क्रामक र खतरनाक बन्दै गएको छ।
जागौँ महानुभावहरू जागौँ। कोरोना डब्लुएचओ र बिल गेट्सको षड्यन्त्र हो भन्न छाडौँ। डब्लुएचओ र बिल गेट्सलाई आफ्नै देशका र तेस्रो विश्वका मानिस मार्दा माखो पनि फाइदा हुँदैन। पहिलो लहरले उनीहरूकै मानिसहरू सोत्तर भए। त्यस्ता भ्रामक हल्लाहरू फिँजाउनेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउन ढिलो भैसकेको छ।
अर्को कुरा मास्क लगाउनु हानीकारक हो भन्ने स्वनामधन्य डाक्टरहरूबाट पनि बचौँ। मास्कको मेकानिज्म नबुझेका यस्ता जडबुद्धिहरूको कुरा किन पत्याउने। मास्क लगाउँदा आफूले फ्याँकेको कार्बनडाइअक्साइड फोक्सो भित्रै पसेर झनै हानी गर्छ भनी कुतर्क पत्याउने सिकन्दरहरूलाई मेरो प्रश्न – मास्क लगाएर कार्बनडाइअक्साइड भित्रै तानेर कतिजना बेहोस् भए? वा कतिलाई अस्पताल भर्ना गर्नु पऱ्यो? कति मानिस मरे? केही तथ्याङ्क छ? प्रमाण छ?
सरकारले नागरिकका लागि ल्याएको (मागेर वा दान स्वीकारेर ल्याएको भए पनि) कोभिडको खोप लगाउन, मास्क लगाउन, घरभित्र बस्न अझै अटेरी गर्नुहुनेहरूलाई मेरो एक मात्र सुझाव- वैज्ञानिक आविष्कार, अध्ययन, मूल्य र मान्यतालाई चट्टै त्यागेर द फ्ल्याट अर्थ सोसाइटी (The Flat Earth Society) को सदस्य बन्नुहोस्। यहाँ लोगोसमेत राखिदिएको छु।
विश्वमा "पृथिवी चेप्टो छ" भन्ने मानिसहरू थुप्रै छन्। त्यस्ता मान्छे पश्चिमी देशमै छन् जहाँ वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानले अभूतपूर्व गति लिएको छ। तिनैलाई पत्याउनुहोस् र सदस्य बन्नुहोस्।
Posted by Kumud Adhikari at 11:06 PM No comments:
Posted by Kumud Adhikari at 5:19 AM No comments:
मित्रवर ! तपाईँको ऋणबाट उऋण कसरी होऊँ ?
गोस्वामी तुलसीदासको एउटा साह्रै सुमधुर भक्तिपूर्ण भजन छ:
भरत भाई ! कपि से उरिन हम नाहीँ।
एठो खाय अछूत खवावत। हाथ धोवत टक माहि।।१।।
सौ योजन मर्याद सिंधू की लांग गयो पल माहि।
लंका जाय सिया सोधी लाये। गर्व नहीं मन माहि।।२।।
यसमा पण्डित जसराजले शास्त्रीय रागमा स्वर दिएका छन् भने अनुप जलोटाको गायन पनि उत्तिकै कर्णप्रिय छ।
यो प्रसङ्ग भगवान् रामले लङ्का विजय गरेर आइसकेपछि भरतसँग हनुमान(कपि)ले गरेको सहयोगबारे बयान गर्दै, 'म कसरी कपिको ऋण तिर्न सकौँला, म कहिल्यै उऋण हुन सक्ने छैन, यस्तो गुण लगाएका छन् कपिले'.. भन्नु भएको प्रसङ्ग हो यो।
रामायणको प्रसङ्गबाट बाहिर निस्केर हामीहरूले आफ्नै जीवन नियाल्दा हाम्रा जीवनका उकाली-ओराली, भीर-पाखा, दुःख-पीडामा हामीलाई स्नेह गर्ने, माया गर्ने र बिना सर्त सहयोग गर्ने प्रिय मानिसहरू पनि हाम्रो समाजमा हुन्छन्। आफूलाई गुण लगाउने व्यक्तिलाई म कुनै पनि तराजूले तौलिन चाहन्नँ। यदि कसैले जीवनमा एकै पटक पनि गुण लगाएको छ भने, मेरा लागि त्यस्तो व्यक्ति श्रद्धाको पात्र नै हो। धेरै गुण लगाउने व्यक्तिहरूप्रति कृतज्ञ हुनु स्वाभाविक हो तर उहाँहरूले लगाएको गुणको ऋण तिर्न असम्भवप्रायः देखिन्छ। यही प्रसङ्गमा मेरो जीवनमा प्रगाढ मित्रताको कोसेली लिएर आउनुभएका डा. रवीन्द्र समीरका विषयमा केही लेख्ने आँट गरेको छु।
कोभिड-१९ सँगको युद्ध
असोज २८ गते बुधबार। माघे इलाममा बिहान बेलुका चिसो बढ्न थालेको थियो। दुई-तीन दिन यता बडो फूर्ति लगाउँदै मर्निङ वाकमा हिँड्ने भएँ। हाफ टिसर्ट र हाफपेन्ट लगाएर। टाउकामा जेबिएलको हेडफोनमा पण्डित जसराजले गाएको करिब ३० मिनट लामो "गोविन्द दामोदर माधवेति……." भजन सुन्दै। मर्निङ वाकमा हिँड्दा मेरो पहिलो प्राथमिकतामा यही भजन पर्छ, दोस्रोमा सुनील गाङ्गुलीको इलेक्ट्रिक गिटारका धुनहरू। घरबाट निस्किएर माल्दाजुको घर हुँदै बर डाँडा निस्किएर कामीडाँडा निस्किएँ। त्यहाँबाट मूलबाटो हुँदै तल झरेर घर पुग्दा करिब २० मिनटको वाक हुने। घर आएर एकछिन उफ्री-पाफ्री गर्दा तीस मिनट हुने र कसरतको कोटा पनि पुग्ने। अँ, बुधबारको दिन, कपाल नकाटेको निकै दिन भएकाले छोरी नेहासँग बिहानै कपाल काटी मागेँ।(लकडाउन भएदेखि सेलुनलाई असुरक्षित ठानी, कपाल काट्ने जिम्मा छोरीकै छ) कपाल काट्न आँगनका छेउमा स्यान्डो गन्जी लगाएर बसेँ। बिहानीको चिसामा ५५ कटेको मान्छेको फूर्ति अलिक बढी भयो कि भन्ने मनमा चाहिँ लागि नै रह्यो। मानिसको जात न परेँ, अहङ्कार र अभिमान त थिए नै, चाहे म देखाऊँ या नदेखाऊँ।
यही बुधबार बेलुकी ज्वरो आयो। थर्मामिटर घरमा थियो नै। नाप्दा १०२ डिग्री ज्वरो देखियो। बेलुकी नै एउटा सिटामोल खाएर सुतेँ। राति निकै अस्पट भयो र बिहान उठ्न सकिनँ। बिहीबार बिहान ज्वरो उस्तै थियो। सामान्य ज्वरो होला जातिहोला भन्नेमा पुगियो। खाना खाएर फेरि सिटामोल खाएँ। दिउसो ज्वरो फेरि बढ्यो, धेरै होइन त्यही १०२.५ डिग्री। बुधबारदेखि नै खोकी पनि लागिरहेको थियो। तुरुन्त डा. समीरलाई फोन गरेँ। उहाँलाई मेरो फोक्सोको स्थितिबारे मलाईभन्दा बढी थाहा छ। मेरो फोक्सोले चिसो सहन नसक्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। उहाँले ज्वरो बढ्न नदिन सिटामोल खाइराख्न र एजिथ्रोमाइसिन ५०० एमजी दिनको एक पटक खान सल्लाह दिनुभयो। कोरोनाको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सिटामोल एउटाले नभए दुइटा, दुइटाले नभए तीनटा खान तर ज्वरो बढ्न नदिन सल्लाह दिनुभयो। दिदी फिक्कल जानुभएको थियो, फोन गरेँ र एजिथ्रोमाइसिन ल्याइमागेँ।
बिहीबार बेलुकी सुरु गरेको एजिथ्रोमाइसिन मङ्गलबार बेलुकी सकियो। बुधबार फेरि डा.समीरलाई फोन गरेँ र स्थितिबारे अवगत गराएँ। यसबीच स्थितिमा खासै सुधार भएन। सिटामोल खाँदा ज्वरो १०२ बाट १ डिग्री ओर्लथ्यो, तीनचार घण्टा पछि उस्तै। एजिथ्रोमाइसिनले काम गर्ला भन्ने लागेको थियो। अर्को बुधबार बिहान उहाँलाई फोन गर्दा, छातीको एक्सरे र टाइफाइड हो होइन चेक गर्नका लागि रक्त परीक्षण गरेर रिपोर्ट पठाउन भन्नुभयो। त्यही दिन ज्वरो आउँदाआउँदै फिक्कल गयौँ र एक्सरे तथा रक्त परीक्षण गरायौँ। रक्त परीक्षणले टाइफाइड नभएको देखायो। बेलुकी घर फर्केर एक्सरे र रक्त परीक्षण रिपोर्टको फोटो खिचेर डा. समीरलाई इमेलद्वारा पठायौँ। डा. समीरले निमोनिया भएको जानकारी गराई तुरुन्तै पिसिआर जाँच गराउन भन्नुभयो। साथै निमोनियाको औषधि पनि लेखि पठाउनुभयो। कोभिड निमोनिया भएको हुन सक्ने र त्यसले कठिन परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ भन्दै, अक्सिमिटरले अक्सिजन लेभल बारम्बार जाँचिरहन र रिपोर्ट गर्न सल्लाह दिनुभयो। अक्सिजन लेभल ९२ भन्दा घट्यो भने तुरुन्त अस्पताल भर्ना हुनु पर्ने सुझाव थियो उहाँको। पिसिआर टेस्ट कहाँ गर्न सकिन्छ भनी सोधीखोजी गर्दा, खोजीगरिदिने काम भतिज केदारले लिए। उनले दसौँ जनालाई फोन गरी कुरो बुझ्न लगाउँदा, पिसिआर गर्न धरान वा विराटनगर जानु पर्ने स्थिति देखियो। माघेबाट गाढी चढेर धरान वा विराटनगर जाने आँट पटक्कै पलाएन। मन दोधारको स्थितिमा थियो। एजिथ्रोमाइसिन खाएका छ दिनमा संसार वास्तविक हो कि होइन, मैले देखेका सुनेका कुरा वास्तविक हुन् कि हैनन् भन्ने लागिरह्यो।
माघेमा अक्सिमिटर थिएन। तल लोकेन्द्रकहाँ थियो तर बेलुकी कता माग्न जाने भनेर बेलुकी केही गरिएन। छोरी नेहाले अघिल्लै दिनदेखि तुरुन्त काठमाडौँ जाऊँ भनिरहेकी थिई। पहिलो कारण पिसिआर काठमाडौँमा सजिलै जचाउन सकिन्थ्यो, दोस्रो रोग जटिल हुँदै गए तुरुन्त अस्पताल जान सकिन्थ्यो, तेस्रो काठमाडौँमा औषधिहरू पनि सजिलै उपलब्ध हुन्थे।
मानसिक स्थिति बढो जटिल भैरहेको थियो। आमालाई भेट्न वर्ष दिनपछि आएको थिएँ। दुईचार दिनमा दसैँ आउँदै थियो। अनि फेरि तिहार। तिहारसम्म माघेमा आमासँगै बस्न भनेर आएको थिएँ। घर छोडेर हिँड्न पटक्क मन थिएन। तर अर्धचेतनजस्तो अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले छोरीको आग्रहलाई टार्न सकिएन। आमाले पनि उपचार गरी जाति भएर घर आउन भन्नुभयो र हामीले बिहीबारै काठमाडौँ जाने निधो गऱ्यौँ। हिँड्ने बेलामा उसैले लोकेन्द्रकहाँ गएर अक्सिमिटर लिएर आई। अक्सिजन मापन गर्दा ९२ र घट्दै गएर ९० सम्म देखायो। करिब १२ बजेतिर हामी हिँड्यौँ।
मेरो छातीले चिसो थेग्न नसक्ने हुनाले चिसो गाढिएको हुनसक्ने मलाई लागेको थियो। बोङ्काइटिस वा निमोनिया हो भन्ने त थियो तर कोभिड-१९ नै होला भनेर चाहिँ पटक्कै लागेको थिएन। बिहीबार बेलुकी ५ बजे काठमाडौं डेरामा आइपुग्यौँ। अर्को दिन ७ गते नै पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि स्वाब दियौँ। हामी श्रीमान्-श्रीमतीले स्वाब दियौँ तर छोरी त्यस बेला बाहिर गएकीले उसको भने छुट्यो। बेलुकी नै पिसिआरको रिपोर्ट आउँछ भनेका थिए। यसैबीच दीपक भाइलाई निमोनियाको औषधि मगाएर खान थालीसकेको थिएँ। राति दुई बजेतिर ब्यूँझिएर मोबाइल हेरेँ। एसएमएसमा रिपोर्ट पठाएको रहेछ। हामी श्रीमान्-श्रीमतीकै पोजिटिभ। एकछिन त विश्वासै लागेन। तर सत्य त त्यही म्यासेज थियो। कोभिड-१९ ले हामीलाई भेटिसकेको थियो।
दुई दिन पछि छोरीको पिसिआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आयो। यो निकै खुसीको कुरा थियो।
यस बीच प्राय हरेक दिन जसो डा. समीर सम्पर्कमा आउनुभयो। अक्सिमिटरले हरेक घण्टा अक्सिजनको लेभल नाप्न र ९२ भन्दा कम भए तुरुन्त अस्पताल भर्ना हुन आग्रह गर्नुभयो। छोरीले अक्सिमिटर किनेर ल्याइन्। औषधि खाँदै जाँदा स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गयो। डा. समीरले बारम्बार "म छु। नडराउनुहोस्। केही हुन दिन्नँ।" भनीरहनुहुन्थ्यो। उहाँको आडले, भरोसाले र प्रेमले थप उपचारको काम गऱ्यो। सात दिनको निमोनियाको औषधि खाए पछि पुनः एक्स-रे गरेर निमोनियाको स्थिति हेर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। कोभिड पोजिटिभ केसको एक्स-रे जहाँपायो त्यहीँ नहुने। ढाँटेर एक्स-रे गर्नुभनेको सयौँलाई कोभिड सार्नुजत्तिकै थियो। स्थिति जस्तो सुकै भए तापनि, त्यसो गर्न म सक्तिनथेँ। यता र उति फोन गर्दा गर्दै भतिज पङ्कजको सहयोग र डा. समीरको सल्लाहले भक्तपुर अस्पतालमा पुगी दुवैजनाले एक्स-रे गऱ्यौँ। फेरि पहिलेको जस्तै फोटो खिचेर डा. समीरलाई इमेल मार्फत पठायौँ। उहाँले एक्स-रे हेरेर ९०% निको भैसकेको र बाँकीका लागि तीन दिनको औषधि थप्न सल्लाह दिनुभयो। कार्तिक १७ गतेसम्म औषधि खाँदा ज्वरो, खोकी निको भैसकेको थियो। शरीर चाहिँ धेरै शिथिल भएको थियो तर मन चङ्गा बनेको थियो। डा. समीरकै सल्लाह अनुसार फेरि कार्तिक २० गते बिहान पिसिआर टेस्ट गर्न स्वाब दियौँ, तीनै जनाले। हाम्रो भाग्य, तीनै जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। डा. समीर अझै भन्नुहुन्छ, "नडराउनुहोस्! केही हुँदैन। म छु।" यो वाक्य कुनै औषधिभन्दा कम थिएन। मानिसहरू सानो हेलचेक्र्याइँले ज्यान गुमाइरहेका थिए। कोही अस्पताल पुग्न नपाई अस्ताउँथे। कसैले बेड पाउँदैनथे र मृत्युवरण गर्थे। कसैको पैसा पुग्दैनथ्यो कसैले अस्पताल जान र औषधि खान नमानेर जीवन त्यागिरहेका थिए। कसैको के हुन्थ्यो, कसैको के हुन्थ्यो। यस्तो स्थितिमा आफ्ना प्रिय मित्रको ज्यानको जिम्मा लिनु सानो कुरा पटक्कै होइन। कदापि हुँदै होइन। डा. समीरसँग त्यो असाधारण क्षमता छ, त्यही भएर नै लाखौँका प्रिय हुनुहुन्छ। विनम्रता र मानवताका अप्रतिम उदाहण, प्रिय डा. समीरकै कारण मैले स्वास्थ्य लाभ गरेँ, गर्नेछु। लाग्छ, उहाँकै कारण पुनर्जन्म भएको छ।
म र डा. रवीन्द्र समीर
डा. समीरसँग मेरो मित्रताको नाता गाँसिएको साहित्यको माध्यमबाट हो। मैले चलाउने गरेको एउटा हिन्दी इन्टरनेट पोर्टलमा मैले उहाँको एउटा लघुकथा अनुवाद गरी प्रकाशित गरेको थिएँ। यो करिब १५ वर्ष अघिको कुरा हो। त्यसपछि उहाँले आफ्ना सबै लघुकथाका पुस्तकहरू मलाई पठाउनुभएको थियो। त्यसपछि हाम्रो कुराकानी धेरै बाक्लियो। सञ्चारका भएजति माध्ययमा हाम्रा कुरा हुन थाले। अनि भेट पनि हुन थाल्यो। म काठमाडौँ आएर बस्न थाले पछि भेटहरू पनि सघन हुँदै गए। अहिले उहाँका साहित्यिक कृतिहरू १२ वटा पुगिसकेका छन्।
डेढ दसक देखिको मित्रतामा हामीले थुप्रै दुःखसुख बाँड्यौ। तर यस डेढ दसकको अवधिमा उहाँले गरेको स्नेह र प्रेमको ऋण अलिकति पनि तिर्न सकेको छैन। म जाबोले तिरौँला पनि कसरी? मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यमा अलिअलि गडबडी हुँदा पनि म उहाँलाई नै सुनाउँछु। उहाँले नै दिएको औषधि खान्छु, खुवाउँछु। कैयन् पटक हामी दिनभरि साहित्यका विषयमा कुराकानी गर्दै बसेका छौँ। कहिलेकाहीँ भन्छु, "रवीन्द्रजी, म तपाईँको ऋण कसरी तिर्न सकौँला।" उहाँ मुसुक्क हाँसेर भन्नुहुन्छ, "मैले तपाईँलाई ऋण दिएकै छैन। नदिएको ऋण किन र कसरी तिर्न भन्नू मँ? तपाईँजस्तो साथी भेट्नु नै सापोनापो भैहाल्यो नि।"
तर मलाई लाग्छ रवीन्द्रजी, मैले तपाईँलाई केही दिन सकेकै छैन। भविष्यमा मेरा लागि तपाईँले कति गर्नुहुन्छ त्यसको सानो अनुमान मलाई छ। ती सबैलाई हेर्दा तपाईँको प्रेम र स्नेहलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने क्षमता मसँग छैन र भविष्यमा पनि हुनेछैन। जसरी भगवान् रामचन्द्र कपिको लगाएको गुणबाट उऋण हुन सकेनन्, म पनि तपाईँले लगाएको गुणबाट उऋण हुन सक्तिनँ। र भगवान्‌सँग एउटै प्रार्थना गर्छु, "अर्को जन्ममा पनि म तपाईँको मित्र भएर जन्म लिऊँ। तपाईँले यस जन्ममा लगाएको ऋण त्यही जन्ममा तिर्न सकूँ।"
Posted by Kumud Adhikari at 8:33 PM2comments: